Nodimandry i Alain Boutr: very andry niankinana ireo mpanakanto maro | NewsMada
Nodimandry i Alain Boutr: very andry niankinana ireo mpanakanto maro
Miasa ao ambadika, mpamorona ny lazan’ny mpanakanto, mpametraka ny mampiavaka azy ireo. Anisan’ireo “mpametraka mpanjaka” eo amin’ny tontolon’ ny mozika i Alain Boutr.
Ratovondrahona Christian Alain José no tena anarany. Eny, na ireo namany akaiky aza vitsy no mahalala izany, fa Alain Boutr hatrany no niantsoan’ny maro azy. Mety ho vitsy ihany koa ny mahafantatra azy, ivelan’ny tontolon’ny mozika, satria tsy mba mpanakanto malaza, saingy malaza amin’ny mpanakanto i Alain Boutr…
Tsy nahatosika ny aretina nandazo azy i Alain Boutr, ny alin’ny alakamisy teo, ka nodimandry tao amin’ny hopitaly Befelatanana , teo amin’ny faha 41 taonany. Anisan’ireo nanaraka ny fitsaboana azy sy nanao ny ala nenina rehetra ireo mpanakanto namany toa an’i Taa Tense. Izy ireo rahateo no nahazoana ny vaovao ratsy rehefa tsy tana intsony ny ain’i Alain Boutr.
“Fa iza ilay Alain Boutr? Ilay anarana toa hita misoratra amin’ny rakitsary na anaty rakikira ihany fa toa tsy fantatra mihitsy? “ fanontaniana napetraky ny maro io, omaly. Anisan’irony mpanakanto miasa “ao ambadiky ny aloka” irony tokoa mantsy izy hatramin’izay. Angamba! Anefa ny 80 %n’ireo mpanakanto nanana hira malaza, indrindra ireo avy any amin’ny faritra, dia noho ny asa-tanany avokoa.
Mpamoron-kira, mpitendry, indrindra teknisianina amin’ny fandrindrana hira i Alain Boutr. “Tsy toa ireny ny lalako teo amin’ny mozika raha tsy nisy azy. Maromaro izahay mpanakanto tena niankina taminy ny lazanay. Nandalo tao amin’ny studio any tao 67 Ha tao avokoa na mpanao hira fiderana, na jazz, indrindra moa hira tropikaly. Tena harem-pirenena no hilazako azy iny”, hoy i Mamy Gotso.
“Alain, noho ny tsara indrindra nomenao sy foinao ho ahy tamin’ny fo tokoa no nahatonga ahy ho Taa Tense. Tena vitanao ny nampiavaka ahy, nandona ny fon’ny olona rehetra tamin’ireo hiram-pitiavana…”, hoy kosa i Taa Tense.
Ho fanomezam-boninahitra farany an’i Alain Boutr, naneho firaisankina ireo mpanakanto namany hirakarakara ny razana. Fantatra fa nandrasana tao amin’ny Tranompokonolona Analakely izy, omaly. “Manentana hatrany antsika mpanakanto hifanampy, hiaraka hanatitra azy any Beloha sur Tsiribihana isika”, hoy kosa i Mamy Gotso.